Basungula isengezo se-smartphone ukuthola i-AIDS ne-syphilis - i-Afrikhepri Fondation
NgoLwesine, Novemba 26, 2020
Bakha i-accessory ye-smartphone ukuthola i-AIDS kanye ne-syphilis
DOnjiniyela baseMelika bakhiqize isengezo eshibhile sama-smartphone esikwazi ukubona ngokushesha i-AIDS ne-syphilis. Umshini ukhiqiza okokuqala ngqa yonke imisebenzi yemishini, i-optical ne-elektroniki yohlelo lokuhlaziywa kwelabhorethri, kusho abaklami bayo ngoLwesithathu ephephabhukwini lezokwelapha laseMelika iScience Translational Medicine. Onke amandla kagesi anikezwa yi-smartphone. Le nsiza encane, engaphinde ixhunywe kwikhompyutha, muva nje ihlolwe ngabasebenzi bezempilo eRwanda. Bahlaziye ithonsi legazi elithathwe eminweni yabesifazane abangama-96 abaqashwe njengengxenye yohlelo lokunqanda ukudluliswa kwengculazi isuka kumama iye enganeni.
Umsebenzi wethu ukhombisa ukuthi ukuhlaziywa kwelabhoratri okuphelele kungenziwa nge-smartphone accessory, kusho uSamuel Sia, uprofesa wezobunjiniyela bezokwelapha e-Columbia University eNew York, futhi ongumbhali ohola walokhu okusunguliwe.
Indlela ezosetshenziselwa ukwenza ukuxilongwa ngethonsi legazi kulula ukuyisebenzisa njengoba kukhonjisiwe kule vidiyo nguTassaneewan Laksanasopin noTiffany Guo. © Sia Lab, Columbia Engineering, YouTube
Ukuhlolwa kwamaRandi we-34 kunamadola angu-18.450
Ukuhlanganisa ubuchwepheshe be-microfluidic nentuthuko esanda kwenziwa ku-elektroniki yabathengi kungenza ukuxilongwa kwelebhu kufinyeleleke cishe kubo bonke abantu abakwazi ukufinyelela kuma-Smartphones, esho, enezela ngokuthi kungaguqula indlela okulethwa ngayo izinsizakalo zezempilo. emhlabeni wonke.
Isesekeli, esincane futhi esanele ngokwanele ukulingana ngesandla esisodwa, singenziwa ngezindleko zasefektri ezingama- $ 34 - okungaphansi kakhulu kwe- $ 18.450 yemishini elingana nelebhu, kusho abacwaningi. Bathole indlela yokuthi le divayisi idle ugesi omncane, obalulekile kwamanye amazwe lapho ukusatshalaliswa kukagesi kuyingozi. Futhi inamandla kakhulu, idinga ukuqeqeshwa okuncane ukuze ikusebenzise futhi ayidingi sondlo, kusho onjiniyela bayo.
isigaba IMPILO NEMPILO
Indlela yokulungisa iNdolé?
Ukuqothulwa kokuthula: AmaMelika aseMelika ayesongelwa idamu e-Amazon
Abapristi baseGibhithe, uHerodotus noDiodorus waseSicily
Amandla Wemisebenzi - Charles Duhigg (Audio)